ग’र्भ क’सरी ब’स्छ ? जानी राख्नुहोस – Jagaran Nepal
ग’र्भ क’सरी ब’स्छ ? जानी राख्नुहोस
ग’र्भको सुरुवात पुरुषबाट नि’स्कने शु’क्रकीट र स्त्रीमा विकसित डि’म्बको मिलनबाट हुन्छ । सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा गर्भ’धारण हुन मुख्य रूपमा:
२. यौ’न स’म्पर्क,
३. वी’र्य स्ख’लन,
५. डिम्ब रोपणजस्ता कुरा हुनु आवश्यक छ ।
यौ’न स’म्पर्कका बेला पुरुषको वी’र्य स्ल’खलन हुँदा निस्किएका करोडौं शु’क्रकीटमध्ये केही पाठे’घरको मुख हुँदै पा’ठेघर र त्यसपछि डिम्बबाहिनी नलीमा पुग्छन् । त्यहाँ परिपक्व भएको डिम्बमा ती असंख्य शुक्र’कीटमध्ये एकको मात्र मिलन हुन्छ । यसरी मिलन हुने प्रक्रियालाई निषेचन भनिन्छ । यसरी शुक्र’कीट र डि’म्बको मिलन भएको कोषलाई यु’ग्मज भनिन्छ र यही नै पछि विकसित भएर शिशु बन्छ।
कतिपय स्थितिमा पहिलो वा एक मात्र यौ’न स’म्पर्कमै ग’र्भ रहन्छ, तर सधैं त्यस्तो हुँदैन । ग’र्भ रहन धेरै कुराको तालमेल मिल्नुपर्छ । शु’क्रकीट र डि’म्बको मिलन हुनुपर्छ । शु’क्रकिटसँग मिलन हुन डि’म्ब नि’स्किएको समय हुन जरुरी छ । महिलाको डि’म्ब महिनाको एकपटक मात्र नि’ष्कासन हुन्छ ।
डि’म्ब नि’ष्कासन हुने समय नजिक ग’र्भ रहने सम्भावना बढी हुन्छ । डि’म्ब नि’स्किएको यस्तै १४ दिनमा महि’नावारी सुरु हुन्छ । यस्तै २८ दिनको महिना’वारी भएकी महिलाको १४ औं दिन तिर डि’म्ब निस्कने भएकाले उक्त समयमा यौ’न स’म्पर्क गर्दा ग र्भ रहने संभावना एकदम धेरै हुन्छ ।
शु’क्रकीट डि’म्ब निस्किएको यस्तै २४ देखि ४८ घण्टासम्म बाँ’च्छ भने महिलाको प्रजनन् अ’ङ्गभित्र ७२ घण्टा वा’त्योभन्दा बढी बाँ’च्न सक्छ त्यसैले डि’म्ब निस्कने केही अघिको र केही दिन पछिको समय लाई ग’र्भधा’रणको दृष्टिकोणले असुरक्षित समय मानिन्छ । सामान्यतया महि’नावारी सुरु भएको आठौं दिनमा गर्दा ग’र्भरहने सम्भावना न्यून हुन्छ ।